Adoolessa 26, 2016
Mormii tibba kana godhame, Arsii, Oromiyaa
Godiina Boranaa aanaa miyoo Hiddii Lolaa keessatti Kibxata har’a hiriirri mormii gaggeffamuu jiraattonni ibsanii jiru. Kunis aanaalee Oromiyaa mootummaan gara bulchiinsa naannoo Somaaleetti kutuuf jira jechuun ka mormuu fi kanneen hidhaman akka hiikaman kan gafatu ture.
Bulchaan aanaa Miyoo Obbo Jambaree Abarraa garuu, lafti gara bulchiinsa naannoo Somaaleetti citu hin jiru, kun mootummaa uummataan filatame humnaan fonqolchuuf yaalii kashalabonni gaggeessani dha ittiin jedhan.
Gama kaaniin Godina Arsii Lixaa aanaalee adda addaa keessatti Wiixata kaleessaa mormiin gaggeeffamuu Jiraattonni beeksiisanii jiru.Kanneen Oromiyaa irraa hidhamanii jiran fi 400 caalan haa gadhiifaman, reebichaa fi doorsisi haa dhaabatu jedhu - Hiriirtonni. Bulchinsii Godina Arsii Lixaa deebii kennuu irraa of qusatee jra.
Guutuummaa Gabaasa kanaa armaa gadiitti caqasaa
Korii waldaa Qorannoo ,OSA Adoolessaa 29-31,2016 Waashingiton DC keessatti taa’a Waldaan kun barana ganna 30essoo ulfeeffata
Obbo Baqqalaa Garbaa fi Hogganoonni Kongresii Federaalawa Oromoo Ka Biroon Nyaata Lagachuun Mormii Irra Jiran
Baqattoota Oromoo kaayirootti abiddaan gubatan: beekamtii koolugaltummaa warra dhabetu aaridhan abidda ofitti qabsiise
Hoggantoonni Kongresii Federaalawa Oromoo Mormii Nyaata Lagachuu Ittuma Fufaniiru
Donaald Traamp Kaadhimummaa Paartii Isaanii Simatan Qajeelfama Seeraa Bakkatti Deebisa Jedhan
Hiriira Guddaatu Magaalaa Yaaballootti Geggeeffame Jedhame